China BL6141 Compact ivelany rotor BLDC Fan Motor fanamboarana sy orinasa | Staba
BL6141 Compact ivelany rotor BLDC Fan Motor
Anaran'ny vokatra: Compact Outer Rotor BLDC Fan Motor
Isaina fahefana: 9.6W
Naoty naoty: 24V DC
Toetoetra: Fanjifana herinaratra ambany / habe matevina / mora atambatra / rotor ivelany / faharetana avo / tabataba ambany / androm-piainana lava
Description Tsy misy enta-mavesatra Fahombiazana Max Max Output Power
Speed ​​(RPM): 1.860 1.385 805
Amin'izao fotoana izao (A): 0,12 0,629 1,53
Hery famoahana (W): 2,28 9,68 15,55
TOSIKARATRA (V): 24 24 24
Ny BL6141 Compact Outer Rotor BLDC Fan Motor dia natambatra Staba 10 taona an'ny DC Motor fanamboarana sy fanandramana fanandramana hamolavola manokana Solutions Electric BLDC Motor Solutions. Raha ampitahaina amin'ireo mpankafy herinaratra teo aloha izay misy AC Motors, mpankafy elektrika mampiasa brushless DC Motors misy fanjifana herinaratra ambany kokoa.
Ny BL6141 Compact Outer Rotor BLDC Fan Motor dia miasa ao amin'ny 24VDC ary manolotra 1385RPM Haingam-pandeha avo lenta amin'ny 9.6W.
Izahay Staba Motor dia hanohy hanatsara ny vahaolana Fan Motor, mba hamolavolana sy hamokarana Kely kokoa, maivana kokoa, mpitrandraka tontolo iainana sy fitehirizana angovo, fanaraha-maso fanetsika, fanaraha-maso haingam-pandeha, fironana maivana ary fiarovana ny tontolo iainana.
Previous: BLN5560 Fascia Gun ivelany rotor BLDC Motor
Manaraka: BL75120 BLDC Fan Motor
Ireo mpankafy herinaratra Brushless DC Motor Solutions
Ny mpankafy herinaratra dia iray amin'ireo fitaovana ampiasaina ao an-trano matetika. Manana karazany maro izy ireo ary be mpampiasa. Saingy, ireo mpankafy herinaratra amin'izao fotoana izao dia mampiasa motera AC misy heriny lehibe tokoa, mazàna mihoatra ny 60 watt, izay mandany hery be. Amin'ny maha fitaovana kely ao an-trano izay tokony hovelomina mandritra ny fotoana lava, ny fanjifana angovo, ny feo ary ny hafainganan'ny rivotra no mason-tsivana mivantana indrindra handinihana ny vokatra. Ho an'ny vokatra Electric Fan, ny motera dia iray amin'ireo singa ilaina indrindra.
Ny ankamaroan'ny mpankafy herinaratra eny an-tsena dia mampiasa motera AC nentim-paharazana ankehitriny, izay manana androm-piainana voafetra, fikojakojana manelingelina, fanjifana angovo avo, ary ambany fifehezana maotera. Mba hanomezana fahafaham-po ny olona amin'ny sehatry ny fampiasana isan-karazany sy ny tontolon'ny fampiasana isan-karazany, ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha, ny tabataba ambany, ny androm-piainana lava, ary ny fomba samihafa dia takiana arakaraka ny seha-pihary samihafa. Ny motera AC nentim-paharazana dia tsy afaka mahafeno ireo fepetra takiana etsy ambony.
Mba hamahana ireo teboka fanaintainana etsy ambony, Staba Motor dia nanambatra ny 19 taona fanaingoana ny maotera DC sy ny traikefa amin'ny famokarana mba hivoatra manokana Famahanana herinaratra BLDC Motor Fan. Raha ampitahaina amin'ireo mpankafy herinaratra teo aloha izay misy motera AC, ireo mpankafy elektrika dia mampiasa motera DC tsy misy brush miaraka amin'ny fanjifana herinaratra ambany sy fahombiazana avo lenta. Ankoatry ny angovo-hitsitsy sy ny hitsitsy angovo, raha ampitahaina amin'ny motera AC mahazatra misy maodely fanodinana haingam-pandeha tsy misy hatak'andro tokony ho 3, na ny motera Brushless DC mahazatra aza dia afaka mametraka ny hafainganam-pandeha araka ny sitrapony. Raha mahatsikaritra ny fanitsiana ny hafainganam-pandehan-drivotra marobe, dia azo ampitaina koa miaraka amin'ny maody tsofina mitsivalana tsikelikely. Amin'ity fiasa ity, na dia miatrika ny Electric Fan aza ianao mandritra ny fotoana maharitra, dia tsy hahatsapa ho mahazo aina ianao noho ny habetsahan'ny rivotra tafahoatra.
Ary koa, ny Staba Motor dia hanohy hanatsara ny Fan Motor Solution mba hahatonga ny BLDC Motor ho kely kokoa, maivana kokoa, sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana, ary fitsitsiana angovo. Ny tanjonay dia ny hihaona amin'ny fanaraha-maso manan-tsaina, fanaraha-maso hafainganam-pandeha, maivana, fitsitsiana angovo ary fironana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Stana Motor dia efa manana traikefa efa ho 10 taona amin'ny injenieran'ny fanamboarana maotera, indrindra amin'ny Electric Fan dia nanangona angon-drakitra Motor Prototype Database ho an'ny fanovozan-kevitry ny mpanjifa na safidy, mpanara-maso mifanindran-dàlana, na encoder, haingana araka ny filàn'ny mpanjifa mila fanaingoana vahaolana moto mihaona na mihoatra fangatahan'ny mpanjifa. Staba Motor dia mpamatsy motera azo antoka ary mpanamboatra hatramin'ny 2010. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Electric Fan BLDC Motor Solution, mifandraisa aminay.
BLDC Motor ho an'ny mpankafy trano
Brushless DC Motor ho an'ny mpankafy trano
Motor tsy misy borosy ho an'ny mpankafy trano
Rotor mifanila ivelany
Eco BLDC Motor ho an'ny mpankafy trano
FOC BLDC Motor ho an'ny mpankafy trano
Motor fanaraha-maso FOC ho an'ny mpankafy trano
FOC Motor ho an'ny mpankafy trano
Motor maharitra BLDC maharitra mateza ho an'ny mpankafy trano
Motor BLDC mahomby be ho an'ny mpankafy trano
Motor BLDC haingam-pandeha ho an'ny mpankafy trano
High Torque BLDC Motor ho an'ny mpankafy trano
Long Life Span BLDC Motor ho an'ny mpankafy trano
Motor ambany fanjifana BLDC ho an'ny mpankafy trano
Low Noise BLDC Motor ho an'ny mpankafy trano
Motor ho an'ny mpankafy an-trano
BLDC Fan Motor, Motor, Brushless DC Motor, Motor tsy misy borosy, BLDC Motor, Vacuum Cleaner, fangatahana pricelist